Kacaankii Ka -mid -noqoshada ayaa sii fidaya | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Kacaankii Ka -mid -noqoshada ayaa sii fidaya
Agoosto 8 , 2021
Ardayda Dugsiga Sare ee Aagga Stillwater waxay kor u qaadayaan "Kacaankii Ka -mid -noqoshada" macallimiinta ku sugan bartamaha -galbeed. Xubno ka tirsan Ponies TRUST Club (Ixtiraamka Dhabta ah ayaa Midaynaya Wadajir) ayaa ka hadlay Shirkii Xiriirka PhysEd oo lagu qabtay SAHS horaantii bishaan. Shirka horumarinta xirfadda ayaa soo jiita boqolaal macallimiinta waxbarashada jimicsiga oo ka kala socda gobolka.
Xubnaha Naadiga TRUST iyo saaxiibbadood waxay ka wada hadleen sida kooxdu isugu keento ardayda - leh iyo kuwa aan naafada ahayn - iyagoo adeegsanaya awoodda Olombikada Gaarka ah. Dad badan ayaa sheegaya in waayo -aragnimadu ay noloshooda u beddeshay.